गम्भिर आ*रोप पछि रवि लामिछानेले मुख खोले !::Point Nepal
गम्भिर आ*रोप पछि रवि लामिछानेले मुख खोले !
न्युज २४ टेलिभिजन बाट प्रसारण हुने चर्चित कार्यक्रम सिधा कुरा जनता सँगका पूर्व पत्रकार शलिकराम पुडासैनी चितवन स्थित एक होटलमा मृ*त फेला परेपछि अहिले यो विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ । उनको निधनलाई लिएर चर्चित संचारकर्मी रवि लामिछानलेलाई समेत जोडेर समाचारहरु बाहिर आउँन थाले पछि अन्तत रविले यस बिषयमा मुख खोलेका छन् ।
पुडासैनीको साथबाट अडियो भेटिएको र उनले त्यसमा संचारकर्मी रवि लामिछानेका कारण पनि यो बाटो रोज्न बाध्य भएको भन्ने कुरा गरेको समाचार बाहिर आएपछि रविले यस विषयमा आफ्नो स्पष्टीकरण दिएका छन् । रविले आफ्नो नाम जोडेर व्यापक प्रचारहुन थालेपछि भर्खरै फेसबुक लाइभमा आएर आफ्ना कुराहरु स्पष्ट पारेका छन् ।
आफुलाई दुख पनि राम्रो सँग मनाउँन नदिएको भन्दै उनले जिउँदो मानिसबाट मात्रै नपुगेर मृ*त मानिसको समेत प्रयोग गरेर आफ्नो बदनाम गर्न खोजिएको बताएका छन् । आफ्नो पूर्व सहकर्मीका निधनले पिडामा रहेका बेलमा आफुलाई दुख मनाउँने पनि समय नदिएर अन्याय गरिएको उनले दुखेसो गरेका छन् ।
रविले त्यस्ता समाचार सुने पछि आफु पनि अचम्ममा परेको बताएका छन् । सो कुरा सुने पछि रातभरी आफु नसुतेको भन्दै उनले आज १५ पटक भन्दा बढि चितवन प्रहरी सँग सम्पर्क गरिसको बताए । प्रहरीले विभिन्न अफवाह मात्रै फैलाइएको यसको सम्पुर्ण कुरा अनुसन्धानै क्रममा रहेका भन्दै विज्ञप्तीनै जारी गरिसकेको तर अफवाह फैलाउँनेहरुले त्यो नदेखेको बताए ।
फेसबुक लाइभमा रविले अर्को एउटा रोचक पाटो पनि खुलासा गरेका छन् । पुडासैनीले पहिले देखिनै अब आफले त्यो बाटा रोज्ने भनेर बिषका बोत्तलको फोटो खिचेर म्यासेन्जरमा विभिन्न व्यक्तिलाई पठाउँने गरेको खुलासा गरेका छन् । उनले अहिले परिवार पिडामा रहेका कारण आफुले धेरैकुराहरु खोल्न नचाहेको तर यदि आफु माथ आरोप लागीरहने र भोली सम्म प्रहरीले यस बिषयमा ठोस कुरा बाहिर नल्याए भोलीको कार्यक्रममा सबै कुराकोखुलासा गरिदिने खुलासा गरेका छन् ।
आफु पैसा कमाउँनका लागी यो क्षेत्रमा नआएको भन्दै उनले आफ्नो कारणले कसैले त्यस्तो गर्ने दिन आयो भने सिधा कुरा कार्यक्रमनै छोडेर दर्शक सामु कहिल्यै अनुहार नदेखाउँने पनि बताएका छन् । आफुले बोलका कुरामा विश्वास नगरि सत्य कुरा अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउँन पनि उनले अनुरोध गरेका छन् ।
प्रहरीले बोलाए आफु कुनै पनि बेला चितवन आउँन तयार रहेको बताउँदै उनले आफ्नो गल्ती प्रमाणीत भए कुनै पनि कानुनी सजाय भोग्न तयार रहेको पनि स्ष्ट पारेका छन् । पुडासैनीको व्यक्तिगत जीवनमा भने केही समस्या रहेको भन्दै उनले अहिले परिवार पि*डामा रहेका बेलामा आफुले त्यो कुरा नभन्ने तर परिआयो भने त्यो कुरा पनि भन्न आफु तयार रहको स्पष्ट पारेका छन् ।
सगरमाथा चढ्न हिँडको मान्छेलाई विचमा आउँने हिउँहरु सँग जुध्न आफु तयार रहेको भन्दै उनले आफु विरुद्ध जतिसुकै षड्यन्त्र गरे पनि सफल नहुने ठोकुवा गरेका छन्। झुटको खेती केही समय टिक्ला तर एक दिन सत्यको जित भएरै छोड्नै दावी गरेका छन् । केहि मान्छे आफु विरुद्ध मिसननै बनाएर लागेको बताउँदै उनले यो पनि त्यसैको अर्को एउटा प्रायोग भएको बताएका छन् । आफु विरुद्ध जिउँदा मानिस मात्रै नभए मृ*त मानिस समेतलाई प्रयोग गर्न खोजिएको गुनासो उनले गरेका छन् ।
आफु माथि दुनियाँ संसारलेनै विश्वास नगरेर एक जना मात्र विश्वास गर्ने मान्छे बाँकी रहनु भएछ भने पनि त्यहि विश्वासलाई लिएर आफु फेरी अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।